जापानमा नेपाली युवायुवतीको यौनक्रिडा गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक यसरि पो भएको रहेछ, बल्ल भयो खुलासा (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > जापानमा नेपाली युवायुवतीको यौनक्रिडा गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक यसरि पो भएको रहेछ, बल्ल भयो खुलासा (भिडियो)
admin December 7, 2018 समाचार	0
काठमाण्डौ – अध्ययनका लागि जापान पुगेका एउटा नेपाली जोडीको १९ मिनेट लामो सेक्स भिडियो केहि दिन पहिले लिक भयो । पोर्न प्रमोट गर्ने पोर्न हब लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साइटमा समेत सो क्लिप फेला परेपछि चौतर्फी चर्चा सुरु भयो । नेपालमा पोर्न हब नखुल्ने भएकाले चर्को चर्चा हुन पाएन तर सामाजिक सञ्जालका निजी च्याटमार्फत् हरेकको म्यासेज बक्समा यो भिडियो फुत्त फुत्त झुल्किरह्यो ।
केटाले औँलाले दुईतिर देखाउँदै भन्छन्, ‘क्यामेरा छ ।’ युवती भन्छिन्, ‘भए पनि मलाई बाल !’ ‘यो ट्युबमा हालेर तिमलाई पोर्न स्टार बनाइदिन्छु है ! हुन्छ ?’ युवक भन्छन् ।
युवती झस्किन्नन्, बरु स्वीकार्दै भन्छिन्, ‘हुन्छ ।’ त्यसपछि दुवैबीच रतिक्रीडा चल्छ ।
यसरी लिक भयो भिडियो ? यी दुवैको दोस्रो भिडियो हेर्दा जिस्केर आफैँले भिडियो बनाए पनि आफैँले लिक गरेको देखिन्न । युवकले आफ्नो र युवतीको आइफोनबाट भिडियो खिचेको देखिन्छ । युवतीको आइफोनमा रहेको भिडियो लिक भएको दाबी आइरहेको छ ।
झुक्काएर मलाई १२ वर्षमै बिहे गरिदिए भन्दै अर्की युवती रुदै छोरा सहित मिडियामा भाइरल हुदै – भिडियो
भर्खरै उलाबारीमा फेरी के भयो यस्तो, ‘घरभित्रै ७ वर्षका बालकले यस्तो गर्नै सक्दैनन्’ भन्दै उर्लियो गाउँ (भिडियो हेर्नुस्)